i-gvSIG: izingqikithi ezingama-36 zeNgqungquthela Yesithupha - iGeofumadas
gvSIG: izihloko ze-36 zezinsuku eziyisithupha
Novemba, 2010 Ukufundisa CAD / GIS, I-GvSIG
Kusukela ngoDisemba 1 kuya ku-3, uhlelo lwesithupha loMhlangano we-gvSIG luzobanjelwa eValencia. Lo mcimbi ungenye yezindlela ezinhle kakhulu eziqhubekayo inhlangano eye yagqugquzela ukusimama kwesoftware engayeki ukumangala ngenxa yekhono layo lokungena emakethe yomhlaba.
Kancane kancane, isoftware yamahhala ibithatha izikhala ezibalulekile ku-niche lapho isoftware ephathelene nayo inokuningi ekunikezayo. Endabeni ye-gvSIG, ihlukaniswa ngokuba yisinyathelo seSpanishi, ngombono ophelele othakazelisayo kanye nomzamo onzima wokuhlela zombili izinqubo kanye nokuhlangenwe nakho kwesicelo sayo.
Ihlathi lamahlelo we-geospatial mahhala libanzi, kufanele nje ubone isifinyezo sezethulo engabonisa ukuthi yini I-FOSS4G 2010. Siyazi ukuthi eziningi zalezi zinhlelo ngeke zibe ne-eco esimeme ngaphandle kokuthi zihlanganise imizamo yokuzimela kokuqhubeka komphakathi. Mayelana nalokhu, sonke sinethemba lokuthi eminyakeni embalwa uhlelo lwe-gvSIG luzokwamukelwa njengenye yamamodeli azalwe ngokweneliseka okusetshenziswayo, kunokuzidela ngenxa yemfashini yamahhala; njengokuthi Idayisi U-Álvaro Angiux:
Umphakathi watholakala ku-gvSIG iphrojekthi lapho ukusebenzisana nokwabelana okwaziyo kwakuyingxenye yekhodi yezofuzo, ithole iphrojekthi lapho izici zobuchwepheshe zibalulekile; Kwakungeke kube ngenye indlela, kodwa kwakungewona kuphela.
Izindawo ezinengqikithi ezizofakwa kule Ngqungquthela kuzoba, phakathi kwezinye:
Photogrammetry futhi Ukuzwa Remote
Izinzwa zokulungiswa okuphezulu kanye nezicelo zazo.
Wonke amaphepha anokuhumusha kweSpanishi-nesiNgisi futhi okuphambene nalokho lapho isethulo singesiNgisi. Ngemuva kwenyanga kuqaliwe, i-ajenda yokuqala seyishicilelwe, noma ngabe kufanele sazi nge Uhlelo lokugcina Ngokufanayo, kune-SEXTANTE, NAVTABLE, IDE, i-GRASS, i-GvSIG Mini ne-Desarrollo gvSIG 2.0 workshops; futhi ngezinsuku ngaphambi kokuba usuku lube yi-EclipseDay-MoskittDay ne-CodeSprint.
Esizoba nakho ngosuku: nalu uhlu olusheshayo lwezihloko ezingama-36:
- Isihleli se-Multimodal se imizila ephakathi ibhasi
- gvSIG Fonsagua: Uhlelo loLwazi lokuphathwa kwamanethiwekhi wokuphakelwa kwe amanzi kanye nokuhlanza amanzi
- Uhlaka lwezomthetho yesofthiwe yamahhala ekuphathweni
- Amathuba ukuthi Umthetho wezingqalasizinda kanye nezinsizakalo ze-Geographic Information Services yaseSpain (LISIGE) inikeza abasebenzisi be-gvSIG
- Ukufuduka ngoba i-gvSIG yenza i-SIG-RB - SIG da Bacia enza i Ribeira de Iguape e Litoral Sul, SP - Brazil
- Ideskithophu ye-gvSIG njengethuluzi lokuhlola ukutshala kokuhlolwa ku ihlathi of araucarias eBrazil
- Uhlelo ukuphathwa kwe ifa ihlathi e-Cuba ku-gvSIG 1.9
- Amagugu viticulture futhi isimo sevini esimweni se-geotourism senziwa ku-gvSIG
- Ukusebenza okusha gvSIG Mobile 1.0
- Inzwa Yeselula ye-gvSIG, isandiso sokuqoqa izilinganiso nokubonwa kwe izinzwa ensimini
- gvSIG Mini, umbukeli wemephu wamahhala weselula
- Ithuluzi Lokuqamba ukuhlela ukuthuthukiswa kwezindawo zasemadolobheni kanye nendawo ye-Extremadura
- Isethulo se indlela yokufundisa ekufundeni kwe-GIS esekelwe kwi-GIS eNyuvesi yaseRennes 2 (iBrittany-France) ngenani lekhono kwi-geography
- Ama-Synergies phakathi kwe-gvSIG ne-Professional Master I-UNIGIS ku-GIS Management
- gvSIG EIEL: uhlelo lokusebenza lokuphatha imininingwane kamasipala
- Ukuphathwa kwedatha nge-gvSIG ku ukuphathwa kwendawo
- gisEIEL 3.0: Idizayini kanye ukwakhiwa izandiso ku-gvSIG 2.0
- geneSIG - Iklayenti le-gvSIG elenzelwe yona ye-newGIS ingqalasizinda
- I-WG-Hlela: isandiso se-gvSIG esisha se i-cadastre yomgwaqo ukuphathwa
- Ukuhlolwa kwe-gvSIG ne-Sextante Amathuluzi we Ukuhlaziywa kwe-Hydrological
- Ingqalasizinda ye Idatha yendawo of Fuenlabrada
- GIS nedatha yamahhala ekusetshenzisweni komkhakha: ukuphathwa kwe iziphuthumayo
- Isicelo ku-gvSIG sokuhlola imibhalo eyenziwe ngaphakathi kobubanzi bephrojekthi I-PNOA-POEX
- Ukuhlanganiswa kwe-GearScape ku-gvSIG
- Idatha yokubonisa yedatha multiparametric for gvSIG
- Ukufinyelela izithombe i-raster kusuka ku-gvSIG usebenzisa i-WKTRaster
- Ukumayini of trajectories: Isiphakamiso somodeli womqondo
- Kwenziwa izincazelo zemithombo ye-gvSIG kusuka I-GeoCrawler
- Ingqalasizinda ye Idathai-3D ye-Torrent City Council, esekelwe kwisofthiwe yamahhala
- OSGeo, isisekelo se-software ye-geospatial yamahhala nesahluko sayo esikhuluma iSpanishi
- Ukusetshenziswa kwe-gvSIG, i-DielmoOpenLiDAR ne-SEXTANTE ukukhiqizwa kwevolumu enkulu Idatha ye-LiDAR
- Ukuhlolwa kwezakhiwo ezisendaweni izakhiwo ezilawulwayo we-UNESCO ye-polygon. Santa Ana de Coro
- I-OCEANTIC. Isoftware yokudlulisa, ukubona ngeso lengqondo nokuphatha imininingwane yedijithali kuyo ulwandle oluphakeme
- Amasu ezwe asetshenziswa esifundweni izindawo zokuvubukula enyakatho-ntshonalanga yesifundazwe saseBuenos Aires
- Intuthuko gvSIG ukuphathwa kanye ukuxhashazwa kwedatha kusuka izindawo zokuvubukula
- I-Mobile GeoWeb - Isicelo samadivayisi eselula ukwenza amabhajethi cishe izifundo ze-geotechnical.
- Ungenza kanjani a I-Geoportal kusuka ku-gvSIG kumaminithi we-15
Lapha ungabona okunye kosuku, nokubukezwa kwalo okudlule.
Thumela Previous«Langaphambilini Amanothi okusetshenziswa kwe-GPS ne-Leica esiteshini esiphelele
Post Next Izinkinga nomhleli wombhalo: I-Microstation V8 ku-Vista ne-Windows 7Okulandelayo »
2 Iphendula i- "gvSIG: izingqikithi ezingama-36 zeNgqungquthela Yesithupha"
Novemba, i-2010 ku
«… Ngemuva kokuthi siqiniseke, amaMaya abe nephutha»
Into engu-37 ayikho. I-GvSIG 2.0, usuku olulindelwe okungenani ...
Inani lisusa inkambo ye-BIM 5D lisebenzisa i-Revit, Navisworks ne-Dynamo
Kulesi sifundo sizogxila ekukhipheni ubuningi ngqo kumamodeli wethu we-BIM. Sizoxoxa ngezindlela ezahlukahlukene zokukhipha amanani sisebenzisa ...